I-China i-hoseyile ye-lip stick yesiko i-logo ye-vegan ye-velvet lip stick yangasese ileyibhile yomlomo we-lipstick ephantsi ye-moq yokwenza i-lip stick stick kunye nababoneleli | Iris Ubuhle
intonga yolebe ethengisa imilebe yesiko ilogo yevegan velvet lip stick yabucala ilebula yomlomo welipstick ephantsi moq makeup lip stick
Yimatte, igudileyo kwaye isilika, ngaphezu kwe-65 yezithunzi zokukhetha. Kulula ukuyisebenzisa, i-vegan kunye nenkohlakalo yasimahla.
EXW ixabiso : 0.99 ~ 2.99 USD
I-Lip stick kufuneka ube ne-makeup kubomi bakho bemihla ngemihla, enokuthi ikhanyise ithoni yesikhumba sakho. Imilebe yethu incamathela ngokukhanya ukuthungwa okufumileyo, bonisa isiphumo senkungu eyomileyo, thambisa imilebe ngaxeshanye, yenza imilebe yakho iqaqambe ngakumbi kwaye ishukume. Nganye ukuze ihambelane neetoni zesikhumba ezahlukeneyo kunye ne-makeup ijonge ngokugqibeleleyo. Thatha enye ngoku kwaye wenze ubuhle bakho bomntu.
*Nika izithunzi ezingama-65 zokhetho lwakho, dibana nesicelo sakho semibala eyahlukeneyo.
* Yongeza umbala oqaqambileyo kwimilebe yakho, wenze izimonyo ezihlala ixesha elide kwaye wenze imilebe yakho ibe nomtsalane ngakumbi.
* Etyebisa ngevithamin E kunye nemeko yokufuma, gcina imilebe yakho ifumile kwaye ithenda.
* Umphezulu weVelvet matte, sebenzisa ioyile yomnquma okanye ukhuphe ioyile yokuthambisa ukuyisusa.
* Ubungakanani obubambeneyo kunye noyilo olukhaphukhaphu, kulula ukuthwala kunye nokusetyenziswa, ukuhombisa ubuhle bakho nanini na okanye naphi na.
Igama lento Intonga yomlomo
Ngaphambili: Umlebe onqunu wegloss ileyibhile yabucala yesiko unqunu umenyezwe lipgloss vegan kunye nenkohlakalo esimahla yeeglosi zemilebe ze
Okulandelayo: Imilebe yolwelo kunye neseti yomilebe iseti ehoselekileyo yomilebe wesiko kunye neglosi yeglosi iseti ikhithi yomilebe matte ileyibhile yabucala yelipstick ikhithi yeglosi
yenza ngokwezifiso intonga yomlomo
imilebe yomgangatho ophezulu inamathela
i-makeup lip stick
ileyibhile yabucala yomlomo we-matte
ileyibheli yabucala imilebe intonga ephantsi moq
intonga yomlomo wevelvet
i-wholesale lip stick
i-wholesale yomlomo intonga yesiko logo vegan
Ileyibhile yentonga yomlomo weMatte yabucala yenza intonga yomlomo...